भरतपुर महानगरको पछिल्लो मत परिणाम सार्वजनिक, मेयर र उपमेयरमा को कति मतले अगाडि ? - Nepalese Times
भरतपुर महानगरको पछिल्लो मत परिणाम सार्वजनिक, मेयर र उपमेयरमा को कति मतले अगाडि ?
Nepalese Times May 14, 2022 (1 Week ago) 703 Views
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदी र गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेनु दाहालबीच कडा टक्कर देखिएको छ । हालसम्म ४०० मत गनिसक्दा रेनु र विजयले बराबरी मत ल्याएका छन् । उनीहरु दुबैजनाले १६७–१६७ मत ल्याएका छन्।
कांग्रेसबाट विद्रोह गरे स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले ५१ मत ल्याएका छन्। यस्तै उपमेयरमा कांग्रेसकी चित्रसेन अधिकारीले २०७ मत ल्याएकी छिन् भने राप्रपाका हिमला गुरुङले ११७ मत ल्याएका छन् ।